सरकार ! जंगलबाट गाउँ छिरेको बाघ आफै नगएसम्म ढोका थुनेर भित्रै बस्ने हो ?
सरकार ! जंगलबाट गाउँ छिरेको बाघ आफै नगएसम्म ढोका थुनेर भित्रै बस्ने हो ?
काठमाडौँ - मन्त्रिपरिषदको शनिबार साँझ बसेको बैठकले जेठ ३२ गतेसम्म कोरोना लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गर्यो । यसपालिको लकडाउन जेठ २० गते मंगलबारसम्म थियो। त्यसको ३ दिन अघि नै १२ दिन थपेर जेठ मसान्तसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू असार १६ गतेसम्म बन्द राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। आन्तरिक लकडाउनसँगै विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समितिले दैनिक ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म नेपाली ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर सुरु गर्न अझै ८/१० दिन लाग्ने बताइएको छ । भारतबाट फर्किनेका लागि पनि विभिन्न २० नाकाहरू तोकेको थियो।
शनिबार नै मन्त्रिपरिषद बैठकअघि बसेको सुरक्षा परिषद बैठकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, विदेशबाट आउने नेपालीहरूको व्यवस्थापनमा पनि सेना परिचालन हुनेछ।
यस बिचमा सरकारले आर्थिक गतिविधि गर्नका लागि पुर्व तयारि तर्फ ध्यान नदिंदा लक्डाउनको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने सकेको छैन । कोरोनाले आक्रान्त यूरोपेली मुलुकहरु बेलायत, जर्मनी, इटालीलगायतले लकडाउनको बिचमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गरे । सामाजिक दुरी कायम गर्न जनचेतना फैलाए । र अन्ततः लक्डाउन खोले ।
त्यसको ठिक विपरित नेपाल सरकारले लकडाउनको समयलाई जनताको हिड्डुल रोक्न र बजार बन्द गर्ने कामको लागि मात्रै सदुपयोग गरेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि गर्नका लागि पुर्व तयारि गर्नु त परको कुरा विदेशबाट फर्किने नेपालीको लागि उचित ब्यबस्थापन गर्नको लागि पुर्व तयारि समेत छैन ।
यसले जंगलबाट गाउँ छिरेको बाघ आफै नगएसम्म ढोका थुनेर भित्रै बस्ने तर अन्य विकल्पको लागि कुनै तयारि नगर्ने उखानको चरितार्थ भएको छ ।